ए’सिडीटीलाई जरैदेखि नि’र्मुल पार्न चाहनुहुनुहुन्छ ? यी उ’पाय अ’पनाउनुहोस् « गोर्खाली खबर डटकम
ए’सिडीटीलाई जरैदेखि नि’र्मुल पार्न चाहनुहुनुहुन्छ ? यी उ’पाय अ’पनाउनुहोस्
२०७७ पुष १४ गते मङ्गलवार प्रकाशित
अ’नियमित र अनियन्त्रित खानपानका कारण आजभोलि मानिसलाई ए’सीडीटी र पे’टसम्बन्धी कयौँ स’मस्याबाट पीडित हुने गर्दछन् । यदी तपाई पनि पे’टसम्बन्धी स’मस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ भने किचनमा उपलब्ध हुने चीजबाट पनि राहत पाउन सक्नुहुनेछ । आजहामी तपाईलाई एसीडीटी र पे’टसम्बन्धी स’मस्याबाट छुटकारा पाउने केही घरेलु उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।
सौँफ: धेरैजसो मानिसले सौँफलाई राम्रो माउथ फ्रेशनरका रुपमा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तर यसको फाइदाका बारेमा भने धेरै कम व्यक्तिलाई मात्र थाहा हुनसक्छ । जुन कुनै समयमा पनि तपाईलाई एसीडीटी जस्तो कुनै स’मस्या महशुस हुने गरेको छ भने राति थोरै सौँफमा पानी राखेर छोडिदिनुहोस् । त्यसपछि बिहान उठेर त्यसलाई पिउनुहोस् । यसो गर्दा एसीडीटीको स’मस्याबाट राहत मिल्ने गर्दछ ।ल्वाङ: किचनमा मसलाका रुपमा प्रयोग हुने ल्वाङबाट पनि एसीडीटीको स’मस्याबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । जुन कुनै समयमा तपाईलाई एसीडीटीको स’मस्या हुने गर्दछ । तब मुखमा ल्वाङ राखेर हल्का चपाउनुहोस् । यसो गर्दा तपाईको पे’टलाई राहत मिल्ने गर्दछ ।
सुकमेल: एसीडीटीको स’मस्या छ भने सुकमेल पनि त्यसको अचूक औषधि बन्ने गर्दछ। एसीडीटीको स’मस्याबाट राहत पाउनका लागि दुई, तीनवटा सुकमेललाई मसिनो बनाए पिस्नुहोस् । त्यसपछि त्यसलाई पानीमा हालेर पिउनु भयो भने एसीडीटीको स’मस्याबाट राहत पाउन सक्नुहुनेछ । सुकमेल चिसो लागेको छ भने पनि निकै उपयोगी हुने गर्दछ । पुदिना: पुदिना एसीडीटीका लागि रामबाण मानिन्छ । यो पे’टसम्बधी विभिन्न रो’गका लागि सहयोगी हुने गर्दछ । यसले एसीडीटीको स’मस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि निकै उपयोगी हुने गर्दछ ।
तुलसी: तपाईको घर आँगनमा पाइने तुलसी एसीडीटीको स’मस्याबाट तुरुन्त राहत दिनमा निकै सहयोगी मानिन्छ । यसले पेटमा एसिडको प्रभाव कम गर्ने र पेटमा ग्यास भरिनबाट रोक्ने गर्दछ । एसीडीटीबाट छुटकारा पाउनका लागि खाना खाएपछि तुलसीको हात चपाउनुहोस् । यसो गर्दा एसीडीटी तुरुन्त कम हुने गर्दछ । अन्य तरिकाहरू नि पढ्नुहाेस् !
यी हुन् ग्या’स्ट्रिक च्वा’ट पार्ने ६ घ’रेलु उपा’य: आ’जभोलि धेरै ग्या’स्ट्रिकको स’मस्या लिएर अस्पताल जाने गर्छन्। ग्या’स्ट्रिक नभएका मानिस भेट्न मु’स्किल पर्छ। यो स’मस्या विभिन्न कारणले देखा पर्छ । ग्या’स्ट्रिक नेपालीको राष्ट्रिय रो’ग हो भन्दा पनि केही फरक पर्दैन । धेरैको ग्या’स्ट्रिक गुनासो सुन्न पाइन्छ हिजोआज । मानिस खान नपाएरभन्दा पनि खान नजानेर रो’गी छ हिजोआज । त्यसो भए के गर्ने त ? यदि ग्या’स्ट्रिक छ भने यी कुरामा ध्यान दिनुस्, तपाईंको स’मस्या च्वाट्टै निको हुन सक्छ ।
प्रशस्त पा’नी पिउने: लगातार पानी पिउँदा पेटमा ग्या’स जम्मा हुन पाउँदैन । जिउमा समेत पानीको सन्तुलन कायम राख्छ । तर, पानीको सट्टा कोक, फेन्टाजस्ता कोल्डड्रिङसकको प्रयोग गर्नु हुँदैन । यसले पेटमा ग्या’स बढाउँछ । लसुनपानी: बिहान उठ्नासाथ दुई–तीन पोटी लसुन पानीसँग निल्ने हो भने ग्या’स्ट्रिक भएकाहरूलाई फाइदा गर्छ । उच्च र’क्तचाप भएकालाई समेत यसले फाइदा गर्छ ।
खाना समयमा खाने: ग्या’स्ट्रिक भएकाहरूले सकेसम्म प्रत्येक दुई घन्टाको फरकमा खाना खाने गर्नुपर्छ । लामो समय केही नखाँदा पेटमा हावा भरिएर यसले स’मस्या उत्पन्न गर्छ । कागतीपानी: पेटमा धेरै ग्या’स भएको अवस्थामा कागतीपानी पिउने गर्नुपर्छ । यसले ग्या’स हटाउने काम गर्छ र पेट फुल्न दिँदैन । खाली पेटमा कागतीपानी खानाले पेटमा ग्या’स कम हुन्छ।
कार्बोहाइड्रेड कम खाने: पे’टमा ग्यास जमेर पचाउन गाह्रो पर्ने भएकाले बियर, वाइन, मकै, राज्मा, बन्दा, प्याजजस्ता खानेकुराबाट टाढै बस्नु उपयुक्त हुन्छ । दूध नपिउने: ग्या’स्ट्रिक भएकालाई दूधले फाइदा गर्दैन । पचाउन गाह्रो पर्ने भएकाले दूध नखानु नै बेस हुन्छ । यसको सट्टा दही र दूधबाट बनेका अन्य परिकार खानु राम्रो हुन्छ ।
पार्लर नगई अनुहार चम्काउन चाहानुहुन्छ ? उसोभए यी ६ घरेलु तरिका अपनाउनुहोस्
६० फुट लामो ५०० टनको फलामको पुल चोरी
प्रेमीसँग मिलेर श्रीमानकाे हत्या गर्ने कान्छि श्रीमती पक्राउ, हत्या यसरी गरेकाे रहेछ (भिडियाे)